Madzidzire Aungaita nezvaMwari
Unogona kudzidza nezvaJehovha nokurava Bhaibheri. Kare kare Mwari akasarudza vamwe vanhu kuti vanyore pfungwa dzake. Zvakanyorwa izvozvo zvinonzi Bhaibheri. Nhasi tinodzidza nezvaMwari nokurava Bhaibheri. Nokuti Bhaibheri rine shoko raJehovha, kana kuti zvaakataura, rinonziwo Shoko raMwari. Tinogona kutenda zvinotaurwa neBhaibheri nokuti Jehovha haamborevi nhema. Hazvi“bviriri Mwari kuti areve nhema.” (VaHebheru 6:18) Shoko raMwari rine chokwadi.—Johani 17:17.
Bhaibheri chimwe chezvipo zvaMwari zvinokosha kwazvo kwatiri. Rakafanana netsamba inobva kuna baba vane rudo inoenda kuvana vavo. Rinotiudza nezvechipikirwa chaMwari chokuchinja pasi kuti pave nzvimbo yokugara yakanaka kwazvo—paradhiso. Rinotiudza zvaakaita munguva yakapfuura, zvaari kuita iye zvino, uye zvaachaitira vana vake vakatendeka munguva yemberi. Rinotibatsirawo kugadzirisa zvinetso zvedu uye kuwana mufaro.—2 Timoti 3:16, 17.
Zvapupu zvaJehovha ishamwari dzaMwari; zvichakubatsira kunzwisisa zvinodzidziswa neBhaibheri. Ingozviudza chete kuti unoda kudzidza Bhaibheri. Hazvibhadharisi mari kuti zvidaro. (Mateu 10:8) Unogonawo zvekare kupinda misangano yechiKristu. Iyi inoitirwa munzvimbo dzokunamatira dzinonzi imba dzoUmambo. Kana ukapinda misangano yechiKristu, uchakura nokukurumidza mukuziva kwako Mwari.
Unogona kudzidza nezvaMwari mune zvinhu zvaakasika. Somuenzaniso, Bhaibheri rinoti: “Mwari wakasika denga nenyika.” (Genesi 1:1) Jehovha paakasika “denga,” akasika zuva. Zvino izvozvi zvinotiudzei nezvaMwari? Zvinotiudza kuti Jehovha ane simba guru. Iye chete ndiye anogona kusika chinhu chine simba zvikuru sezuva. Zvinotiudzawo kuti Jehovha akachenjera, nokuti zvaida uchenjeri kuti asike zuva, rinoburitsa kupisa nechiedza uye harimbodzimi.
Zvakasikwa naJehovha zvinoratidza kuti anotida. Chimbofunga nezvemarudzi ose emichero ari panyika. Jehovha angadai akatigovera rudzi rumwe chete rwomuchero—kana kutorega zvachose. Asi, Jehovha akatipa marudzi akawanda emichero ine maumbirwo, makuriro, mavara, uye manakiro zvakasiyana-siyana. Izvi zvinoratidza kuti Jehovha haasi Mwari ane rudo chete asi ane rupo uye anofunga uye ane mutsa zvikuru.—Pisarema 104:24.
Kana rakanyorwa nevanhu, tingati iShoko raMwari here? Mashoko aani ari muBhaibheri?
‘Jehovha Akasika Zvinhu Zvose’